Home Wararka Yaa ka danbeeyay qaraxii gaariga loogu xiray wariye Ismaaciil Sheekh Khaliif
Yaa ka danbeeyay qaraxii gaariga loogu xiray wariye Ismaaciil Sheekh Khaliif
Ismaaciil Sheekh Khaliif oo ah wariye ka howlgala mid ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho, kana mid ah soo saarayaasha barnaamijyada Kalsan TV ayaa gaarigiisii loogu xiray qarax bishan Disember 4teedii xilli uu ka soo baxay shaqo.
Ismaaciil Sheekh Khaliif aya waxaa ka soo gaaray qaraxaas dhaawac uu hadda la jiifo isbitaalka Digfeer.
Sida dad aad ugu dhow wariye Ismaaciil Sheekh ay MOL u xaqiijiyeen waxaa Ismaaciil laba maalin ka hor inta aanan gaariga loogu xirin qaraxa telefonkiisa ku handaday isla markaana u sheegay in tallaabo laga qaadi doono wariye Ismaaciil Sheekh Khaliif agaasimaha saxaafadda madaxtooyada Cabdinuur Maxamed oo uu adeer u yahay Fahad Yaasiin.
Ismaaciil ayaa handadaada isaga qaatay mid fudud balse Cabdinuur oo xiriir dhow la leh Zakariya Ismaaciil iyo Fahad Yaasiin ayaa ka dhabeeyay dhaartiisii ahayd in tallaabo laga qaadi doono wariye Ismaaciil.
Xukuumadda iyo Madaxtooyada ayaa caburin, handadaad, iyo xarig ku haya warbaahinta madaxa bannaan oo lagu maagayo oo kaliya maxaad runta u tabineysaan.
Ururada suxuufiyiiinta Soomaaliyeed aya si wadajir ah u canbaareeyay xukuumadda iyo Madaxtooyada, waxaana loogu baaqay dhamaan suxuufiyiinta madaxa bannaan in ay is ilaaliyaan.
Previous articleMusuqmaasuqa wasiirka maaliyadda iyo baaritaankii Hanti Dhowrka (Xog & Caddeyn)
Next articleSomaliland: Professor Samatar Loses Confidence in Kulmiye
(Daawo) Dhabancad: “MW Deni uma tagayo Muqadisho wadahadal Farmaajo ee fariin...